Qoyskaaga ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan dheefaha kaarka EBT ee cusub si ay ugu gataan cuntada inta lagu gudajiro bilaha ardaygaagu dhiganaayo waxbarashada masaafada fog.
Yaa u qalma Kaarka Macaashka P-EBT?
Ardayda u-qalma cuntada bilaashka ah ama mida qiimaha jaban waxaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan kaarkaan Faa'iidada Elektarooniga ah (P-EBT). Ardaydu waa inay uqalmaan cunnooyin bilaash ah ama qiimo jaban iyadoo loo marayo mid ka mid ah qaababka soo socda:
Soo gudbi Codsiga Waxtarrada Waxbarashada (AEB) sanad dugsiyeedka 2020-21, AMA
In laguu oggolaado Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP) ama dheefaha Barnaamijka Kaalmada Nafaqada (SNAP)
In lagu qoro Iskuulka U Qalmida Bulshada
OO uu kaqaybqaato / kaqaybqaato jadwalka iskuulka ee waxbarashada masaafada-fog ama iskudhafan
Haddii AADAN wali gudbin arjiga qoyskaaga ee manfacyada wax barashada (AEB) sanad dugsiyeedka 2020-2021, fadlan sida ugu dhaqsaha badan u samee si aad u hubiso inaad uqalanto dheefaha ugu badan.
Waxaad ku buuxin kartaa arjigaaga khadka tooska ah adoo booqanaya cws.mpls.k12.mn.us/application, ama la xiriir dugsigaaga. Wixii su'aalo ah ee ku saabsan Codsigaaga Waxtarrada Wax Barashada, fadlan la xiriir Adeegyada Cunnada & Fayo-qabka ee info.cws@mpls.k12.mn.us.
Sideed ku heli doontaa Faa'iidooyinka P-EBT?
Kaararka P-EBT waxaa lagu soo diri doonaa ayadoo la adeegsanayo cinwaanka guriga ee MPS ay ku hayaan faylka arday kasta oo u qalma. Si loo xaqiijiyo ama loo cusbooneysiiyo cinwaanka guriga ee faylka ku jira, fadlan la xiriir xoghayaha dugsiga ardaygaaga ugu dambayn Jimcaha, Febraayo 19, 2021.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan faa'iidooyinka kaarka P-EBT, fadlan booqo bogga internetka ee gobolka halkan here ama eeg Su'aalaha la Weydiiyo FAQs.